CANAB "JULIAN": SHARAXAAD, BEERITAANKA, DARYEEL, FAA'IIDOOYIN, FAA'IIDO DARO - CANAB
Waa maxay canabka wanaagsan "Julian" iyo sida loo daryeelo isaga
Dhawaan, geedka "Julian" ayaa si weyn u caan ah sababtoo ah tayadiisa, iyo geedaha iskiis u kobcaya ee kala duwan ee noocaan ah waa kibirka wax dhirta. In this article waxaan ku baran doonaa canab "Julian" - sharaxaadda iyo xeerarka daryeelka ee kala duwan, sawir.
Kala duwanaanta noocaas ah waxaa loo adeegsaday naas-nuujiyaha hiwaayadda V. V. Kapelyushin, isaga oo ka gudbaya noocyo caanka ah "Rizamat" iyo "Kesha". Sida laga soo xigtay hadalkan ka soo baxay dad badan oo hareeraysan, "Julian" wuxuu leeyahay iska caabin fiican oo qabow, laakiin wali wuxuu dareemayaa ugu fiican gobollada koonfureed. Sidoo kale dabeecad muhiim ah ayaa leh Bisaylkii hore, beergooyska waxaa la soo ururin karaa dhammaadka July ama bisha Agoosto.
Ma taqaanaa? Dunida waxaa ku jira ilaa 20 kun oo canab.
Tilmaamaha iyo dabeecadaha kala duwan ee noocyada kala duwan
"Julian" wuxuu loola jeedaa miiska kala duwan. Waxay si dhakhso ah u koreysaa, caadi ahaan saddex bilood. Miraha ay ku jirtaa qaab muuqaal ah oo leh stem muddo dheer, qaab muuqaal ah waxay helayaan midab casaan leh oo leh jilbil yar oo huruud ah, waxay gaari kartaa 4 cm dhererka, iyo qiyaastii 3 cm ballaaran.
Canabka "Julian", oo ku salaysan dib u eegista, wuxuu leeyahay jinsi macaan iyo jilicsan, maqaarkiisuna waa dhuuban yahay in la cuni karo dhibaato la'aan. Tayo muhiim ah waa gaadiidka wanaagsan ee canabka iyo kaydinta dheeraadka ah.
Kala duwanaanshaha "Julian" ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo aan qabin, laakiin, sida noocyada ugu badan ee beeraha, waxay leedahay shuruudo gaar ah oo loogu talagalay meeshii lagu beeray.
Canab ee noocyada this kala duwan jecel yahay meelo badan oo qorrax lehSidaa daraadeed, kuwa quraacda ku talinaya waxay ku taliyaan beeritaanka warshad dhinaca koonfureed ee dhismayaasha ama dusha sare. Sidoo kale, canab waa in laga ilaaliyo dabaylaha, sababta oo ah canabkeed uma dulqaadan karo qabyo ah. Si aad tan u sameyso, waxaad ku rakibi kartaa filim ilaalin ama walxo kale oo adag oo laga helo bari iyo waqooyiga geedka.
Sidoo kale waxaad ka akhrisan kartaa noocyada kala duwan ee canabka: "Cabernet Sauvignon", "Fanners", "Annie", "Chameleon", "Veles", "Zabava", "Sofia", "Augustine", "Helios", "Nizina" "" Ruslan "," Talisman "," Pretty Woman "," Lily of the Valley "," Isabella "," Vodogray "," Gala "," Rochefort "," Extra "," Rumba "," Liibiya "," Kishmish " "Cardinal".
Kala duwanaanta noocaan ah ayaa jecel ciidda bacrin ah oo leh dhexdhexaad ama dhexdhexaad ah. Sidaa darteed, haddii dhulka ay acidified, waxaad u baahan tahay inaad ku darto lime iyada oo xisaabinta 200 g halkii 1 sq. Si loo hagaajiyo bacriminta, waxaa ugu wanaagsan in la bacrimiyo dhulka iyadoo la adeegsanayo compost, digada, iyo Bacriminta macdanta.
Noocyada beerta "Julian"
Kala duwan tani waxay leedahay nidaam xidid wanaagsan, kaas oo u oggolaanaya in si wanaagsan loo dhexgalo dhulka, 95% kiisaska, canab si fudud u qaadashada xididka. Iyo beertii canabka Julian laftiisa ma aha wax ka duwan laga beerto noocyo kale.
Marka aad dooranaysid geedka, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay fiiri xididdadiisa. Nidaamka asaasiga ah waa in la sameeyaa oo uu leeyahay ugu yaraan saddex xidid oo xoog leh iyo kuwa yar yar.
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad yarayso gooyo yar yar, waa inay ahaataa caddaan ama aad u iftiin leh, isla mar ahaantaasna casiirka ayaa istaagaya. Haddii gooyuhu uu qalalan yahay iyo midab madow, ka dibna seedling this horey u dhinteen. Waxaad ka hubin kartaa xaalada seedling by jarida sare ee geedka, waa inaad aragto midab cagaaran dhalaalaya on gooyaa.
Waa muhiim! Waa in aanad iibsan geedo ka hor bilowga xilliga beerto, maadaama ay jiraan siyaabo badan oo loo dardar-galin karo koritaanka, laakiin isla xilliga canabku waa uu daciifayaa, ka dib marka la-tallaalidda waxaa jira feejignaan sare oo aan awood u lahayn inuu dego.
Sidoo kale, iibsashada geedo la helay tallaal, waxaad u baahan tahay inaad hubiso meesha wax lagu kiciyo. Si arrintan loo sameeyo, dusha sare ee meesha tallaalka ah ayaa loo baahan yahay in si yar loo dhaqaajiyo jihooyinka kala duwan - waa in aysan jirin wax dhidid ah, midkasto mana jiro farqi u dhexeeya geedka iyo garbaha. Haddii aad ka iibisid sapling kaabash, laakiin aan lahayn laamo iyo ma jiraan wax raad ah oo tallaal ah, ka dibna tani waa xaqiiqda.
Marka aad iibsanayso sapling leh jilif adag ee dayrta, fiiro xaqiiqda ah in aysan jirin caleemo on, sababtoo ah iyada oo loo marayo caleemaha geedka qoday si aad u deg deg ah qoyaan iyo nafaqo lagama maarmaanka ah, arrintan ayaa aad u adkeynaya noolaanshaha canab.
Taariikuhu wuxuu ku kala duwan yahay gobolka. Gobollada koonfureed ee leh qaboobaha khafiifka ah iyo kululaynta "Juliana" ayaa laga soo bilaabo Oktoobar ilaa Maarso. Inta kale ee gobollada, halkaas oo cimilada waa qabow, geedo beerto waa in la macaamilaa guga, ka hor inta ku hari ubaxyada. Marka ubaxyada ubaxyada u baahan yihiin si ay u beeri gooyn.
Waa muhiim! Marka laga beerto gooyn, heerkulka ciidda ee xididada waa in aanay noqon wax ka yar 10 °C.
Wixii canab beerto waa inay god ku qodaan ilaa 80 cm oo qoto dheer isla markaana dhexdhexaad ah. Haddii ciidda meesha aad ku socoto "Julian", waa mid aad u qoyan, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso dheecaan, iyo dhowr toddobaad ka hor intaan lagu beeri geedo waa inay qodaan daloolka oo ha u qalajin.
Marka ceelasha la qodo, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso isku dar ah ciidda, taas oo ka kooban dhulka jilicsan, humus, kuna dar 400 g oo ah superphosphate. Haddii ciidku yahay dhoobo, waxaad u baahan tahay inaad ku darto ciid si isku dar ah (sida ugu badan ee dhulka).
"Julian", sida noocyada kaleba, waxay ubaahantahay daryeel habboon, kaas oo ka kooban waraabin habboon, bacriminta iyo manjooyin.
Nidaamka waraabka ayaa aad muhiim ugu ah koritaanka buuxda ee canab "Julian". Baahidiisa biyo dhawr jeer oo kaliya xilli ciyaareedkann Waraabinta ugu horeysa waxaa la sameeyaa toddobaad ka hor ubax, iyo xigta waa ka dib markii uu dhammaado. Inta lagu jiro waraabinta, waxaa lagu talinayaa in lagu daro qadar yar oo ash ashado ah oo biyo ah.
Waa muhiim! Waraabinta inta lagu jiro ubax waa la mamnuucay, haddii kale tufaaxa inflorescence ayaa dhici karta.
Marka miraha la shubo, waraabinta waxaa loo baahan yahay oo kaliya xaalad ah abaar aad u xoog badan, xaaladaha kale tani lagama maarmaan. Haddii cimiladu ay roob badan tahay muddo dheer, baadiyaha sabiibta waa in laga ilaaliyaa biyaha xad-dhaafka ah adoo rakibaya qolof. Sidoo kale inta lagu guda jiro muddadaas waxay faa'iido u tahay in lagu hirgeliyo duurka oo leh xal boric acid ah.
"Julian" wuxuu ubaahan yahay bacrimin joogto ah, maaddaama dhirta ay ku badan tahay tamar badan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo bacrimin wakhti dheer leh diyaarinta potassium-fosfooras, iyaga oo soo bandhigaya xididada ama buufinta.
Sidoo kale, Bacriminta macdanta ah waa in lagu daraa ciidda sanad walba, guga waa in lagu daboolaa lakab ah compost qiyaastii 5 cm. Kala duwanaantani waxay u jawaabtaa si weyn u maqnaanshaha magnesium, sidaas daraadeed 14 maalmood oo kasta waxaad u baahan tahay inaad ku buufiso kaynta leh magnesium sulfuric acid (250 g oo ah sheyga baaldi biyo ah). Laalaabtan waxaa la fuliyaa inta lagu jiro xilli sii kordhaya, ilaa miro miro.
Gooyaa waa wax aan ka yareynin waraabinta iyo bacriminta, waana nidaam khasab ah oo canab ah "Julian". Marka la gooyo on geedka canabka ah waa in aan ka badnayn 10 burooyinkeeda, iyo duurka waa in aan ka badnayn 45.
Xilliga xagaaga, waxaad u baahan tahay inaad iska xiirto rucubyo si markaa berry ay u weynaadaan una yeeshaan dabeecado dhadhan fiican leh. Dhirta dhalinyarada, waxaa lagu talinayaa in ay ka baxaan farabadan on farabadan ee qadarka la mid ah da'da canab. Sannadkii afaraad kadib markii la beero duurka, waxaa suurtogal ah in ay ka baxdo ilaa 10 rucubood.
Sida loo ilaaliyo canabka iyo cudurada iyo cayayaanka
"Julian" waxaa loo aaneyn karaa noocyo aad u yar, sidaas darteed iska caabinta cudurada kala duwan weli wili si fiican loo fahmo, laakiin tayada qaar ee canab waa la yaqaan. Kala duwanaantan ayaa laga helay ilma-hooda ("Kesha") caabuqa cudurada sida oidiyaanka iyo xayrta yar, ama caarada. Laakiin weli Ha illoobin tallaabooyinka ka hortagga cuduradan. Badbaadinta oidiyumka waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu buufinayo duurka iyaga oo leh kumbir kolloid ah.
Xilliga roobka si looga fogaado anthracnose, taas oo saameeya caleemaha iyo caleemaha yar yar, sameynta dhibco brown on iyaga, waa inaad ku buufisaa dareeraha "Julian" Bordeaux. Dareer isku mid ah ayaa faa'iido leh haddii ay dhacdo Alternaria, oo ku dhacda qoyan, laakiin cimilada kulul waxay saamaysaa midhaha.
"Julian" waxay u adagtahay dhibaatooyinka caamka ah ee beero canab ah sida cirbaha, caarada caarada, cirifka cas, laakiin cudurku wuxuu ku dhici karaa xaaladaha ku habboon. Si loola dagaallamo, isticmaal dawooyinka antifung sida Topaz, Khom, Kurzat.
Ma taqaanaa? Si aad u hesho hal dhalo oo khamri ah celcelis ahaan, waxaad u baahan tahay 600 oo canab.
"Julian" - noocyo kala duwan oo kuleyl ahSidaa darteed, gobollada qaboobaha qaboobaha, wuxuu u baahan yahay hoy khasab ah.
Guryaha waxaa inta badan ku hawlan bartamaha bisha Oktoobar, taas awgeed, baadiyaha waxaa lagu xiraa boodh iyo dhulka la rusheeyaa 10 cm, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in lagu daboolo canab marka hore bac, ka dibna daboolo dhulka oo daboolo caarada ama boorsada ku saabsan 3 cm, ka dibna daboolo dhamaan bacda si aad u ilaaliso dhirta ka badan gawaarida biyaha inta lagu jiro barafka. Si toos ah xilliga qaboobaha, waxaa lagu talinayaa in lakabka lakabiyo oo ka sareeyo dhirta qiyaastii nus mitir.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee "Julian" waxaa ka mid ah iska caabinta kulaylka, cuduro badan iyo dulinyo taas oo la weerari karo, iyo, dabcan, kaadhka ugu weyn ee tayo leh waa mid tayo fiican leh oo casiir leh.
Laakiin, oo ku saleysan dib u eegista daalacashada, faa'iido darrada waxaa ka mid ah iska caabida daciifka ah ee barafku ka badan yahay -20 ° C, inkasta oo badiyayada badankood ay yiraahdaan waxay adkeyn kartaa in ka badan.
Soo koobid, waxaan dhihi karnaa in noocyada this canabkuna ay ku haboon tahay beeralayda waayo-aragnimada leh iyo kuwa bilowga ah, sababtoo ah daryeellidda waa mid fudud oo uma baahna kharash badan oo jireed iyo maaliyadeed.